Fijery fotoana - Plugin hidirana amin'ny sary zanabolana manan-tantara amin'ny AutoCAD - Geofumadas
Aprily, 2019 AutoCAD-Autodesk
Ny Timeviews dia plugin iray tena mahaliana izay mamela ny fidirana amin'ny sary satelita ara-tantara avy amin'ny AutoCAD, amin'ny daty sy fametrahana.
Maka ny mari-pamantarana nomerika amin'ny fifandraisana izay ananako nalaina tao amin'ny Google Earth, ankehitriny dia te-hahita ireo sary manan-tantara amin'ity faritra ity aho.
1. Mifantena ny faritra mahaliana.
Tsotra ny fizotrany. Ny tabilao Timeviews dia voafantina, avy eo amin'ny kisary «View Imagery», tsindrio ny teboka eo afovoan'ny faritra mahaliana antsika ary manangana takelaka milaza fa manodidina io fandrindrana io dia misy sary misy daty fisamborana samihafa :
1 zoom sary 19, miaraka amin'ny pixel 30 centimeters,
1 zoom sary 18, miaraka amin'ny pixel 60 centimeters,
7 17 manangona sary, miaraka amin'ny pixel metatra 1.20,
7 16 manangona sary, miaraka amin'ny pixel metatra 2.30,
7 15 manangona sary, miaraka amin'ny pixel metatra 4.60,
ary 7 dia manangona sary 14, miaraka amin'ny pixel metatra 9.3a,
Rehefa mifidy ny famaha 17 aho, dia maneho ahy ny datin'ireo sary ireo:
Ny 6 avy amin'izy ireo dia avy amin'i Airbus miaraka amin'ny daty jolay, novambra sy Desambra 2018, ary ny vao haingana dia roa volana lasa izay (16 ny Febroary 2019).
Mampiseho ahy ihany koa fa misy DigitalGlobe amin'ny Jolay avy amin'ny 2017.
2. Mamelà ny sary voafantina.
Raha vantany vao voafidy ao amin'ny safidy "View" ny sary dia afaka jerentsika ny sary ao amin'ny famahaola nomena ary ao amin'ny haavon'ny AutoCAD izay ampiasaintsika.
3. Hanampy fizarana tantara.
Ny fanindriana ny bokotra "manampy fotoana" dia afaka misafidy andian-sary avy amin'ilay faritra mitovy izahay mba hanaovana fampitahana.
3. Mahazoa ny sary.
Tena mahaliana tokoa ilay rindranasa, satria ahafahanao mijery sary misy faritra iray ary mety hividy izany amin'ny mpamatsy aza. Tokony horaisina fa ny sary misy dia tsy mozika, fa ny filaharan'ny sary zanabolana misy mifanindry. Ity sary manaraka ity dia mampiseho ny fifandimbiasana eo anelanelan'ny sary Zoom 19 roa sy ny sary Zoom 14 iray izay ao aoriana.
Mbola tsy misy ny serivisy, fa ny fonosana voalohany amin'ny Plex.Earth Plugin ho an'ny AutoCAD.
Amin'ny ankapobeny, hitako fa tena mahaliana, miaraka amin'ireo mety ho maro; amin'ny lafiny iray, hahalala ny fampahalalana azo avy amin'ny faritra iray manokana, manaova fampitahana ny fanovana ara-tantara. Ny tsara indrindra dia miasa amin'ny AutoCAD, na amin'ny dikan-teny farany aza; Miaraka amin'ny fahitana ny "rindrambaiko toy ny serivisy" satria raha tsy mila mividy ny sary ianao dia afaka mampiasa sary amin'ny zanabola amin'ny alàlan'ny famandrihana ny serivisy Plex.Earth.
Raha mikasika ny fanatsarana izay mety hahasoa ny mpampiasa dia ny mampiseho ny takelaka misy ny fandrakofana maimaim-poana ao amin'ny faritra iray ampiasaina, fa tsy mandeha amin'ny toetoetrany; tahaka izay azonao jerena ao amin'ny Google Earth.
Previous Post«Previous Andalana contour avy amin'ny Google Earth - ao anatin'ny dingana 3
Next Post Supermap - vahaolana matanjaka 2D sy 3D GISmanaraka »